Culimadda Soomaaliyeed oo war deg deg ah kasoo saaray fowdada ay bilaabeen xildhibaanada baarlamaanka - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Culimadda Soomaaliyeed oo war deg deg ah kasoo saaray fowdada ay bilaabeen xildhibaanada baarlamaanka
Culimaa’udiinka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa haatan bilaabay olole oo ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kaga codsanayaan inay ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimadda sida aadka ah ugu dhow dowladda federaalka Soomaaliya, kana mid ah xubnaha guddiga gurmadka abaaraha dalka ayaa ka dalbaday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya.
Sidoo kale, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa sheegay in haatan dalka uu ku jiro marxlad adag islamarkaana ay halis ku jirto nolosha dadka Soomaaliyeed oo aad u badan, wuxuuna uga digay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay ka hor-yimaadaan wasiirrada cusub ee dhawaan laga sugaayo inay meel mariyaan.
“Dalka wuxuu haatan marayaa marxalad adag, xilligaan looma baahno in leys jiid jiido, waxaan baarlamaanka leeyahay naga daaya mooshinkaan la sheegayo, waxaan idinka codsanayaa in aadan ka shaqeyn dib u dhaca dalkiinna, dad Soomaaliyeed oo badan ayaa noloshooda halis ku jirto” Sidaas waxaa yiri Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa kusoo beegmaya, xilli maalintii shalay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu warqad deg deg ah u diray ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Warqadaasi ayaa waxay ku saabsanayd saluug ka yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo tiro ahaan gaaraya illaa 105, kuwaas oo ku dhaliilay in golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan magacaabey ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre aysan waafaqsaneyn habka beelaha awood qeybsiga dalka ee 4.5.